Home Wararka CIidanka Xooga Dalka oo qaaday howlgalo ka dhan ah xubno ka tirsan...
CIidanka Xooga Dalka oo qaaday howlgalo ka dhan ah xubno ka tirsan Al-Shabaab
Ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Kumaandooska DANAB qeybta 4aad Guutada 16-aad waxaa ay howlgal qorsheysan ka sameeyeen deegaan ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose.
Saraakiisha ciidamada hoggaamineysay ayaa sheegay in howlgalka ay ciidamada xoogga dalka ee Kumaandooska DANAB ay ka sameeyeen degaanka Caliyoow Baaroow kaas oo uu ujeedkiisa ahaa burburinta goobo ay ku sugnaayeen Ururka Al-Shabaab laguna guuleystay.
Sidoo kale, Saraakiisha ayaa sheegay in howlgalka ay sameeyeen ay kusoo qabteen 4 dagaalame oo ka tirsan Al-haabaab, kuwaas oo xuseen inay dhibaato ku haayeen Bulshada.
Ugu dambeyn, Saraakiisha ayaa tilmaamay in howlgallada ay sameenayaan ay halkooda ka sii wadi doonaan illaa inta ay Ururka Al-shabaab ka ciribtirayaan meelaha ay kaga sugan yihiin deegaanada iyo degmooyinka Gobolka Shabeellaha Hoose.
Previous articleKhalalaase ka dhashay gubid loo geystay kitaabka Quraanka Kariimka ah
Next articleDhaqanka, Waxgaradka, Siyaasiyiinta Mudug oo ku baaqay in Deni Iscasilo
Qoor Qoor oo ku biiriya isbaheysiga Musharaxiinta & Farmaajo oo talo...
Fahad oo shaqada laga ceyriyay & Bashiir Goobe oo la magacaabayo